आनन्दतर्फ लैजाने बाटो—क्षमा
“म सानो छँदा मेरो परिवारमा चिच्याउनु र गालीगलौज गर्नु सामान्य थियो,” प्यट्रिसिया नामकी महिला भन्छिन्‌। उनी थप यसो भन्छिन्‌: “मैले क्षमा दिन सिकेकी थिइनँ। वयस्क भइसक्दा पनि म धेरै दिनसम्म रिस पालेर राख्थेँ अनि राती राम्ररी सुत्नै सक्दिनथेँ।” हो, जीवन रिस र द्वेषपूर्ण भावनाले भरिएको छ भने कोही पनि खुसी वा स्वस्थ हुन सक्दैन। अध्ययन-अनुसन्धानले देखाएअनुसार क्षमा दिन नसक्ने मानिसहरूले निम्न कुराहरू गर्छन्‌:
रिस र तितोपनाले गर्दा सम्बन्ध बिगार्छन्‌। अन्ततः अरूले सङ्‌गत गर्न छोड्‌छन्‌ र एक्लो हुन्छन्‌
ससाना कुरामै रिसाउँछन्‌, चिन्ता गर्छन्‌, कहिलेकाहीँ असाध्यै निराशसमेत हुन्छन्‌
अरूका गल्तीहरूमा बढ्‌तै ध्यान दिन्छन्‌, जसले गर्दा आनन्दित हुन सक्दैनन्‌
क्षमा दिनुपर्छ भनेर थाह भए तापनि त्यसो गर्न नसकेकोले दोषी महसुस गर्छन्‌
तनाव बढेको महसुस गर्छन्‌ र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने जोखिम बढी हुन्छ। जस्तै: उच्च रक्‍तचापको समस्या, मुटु रोगका साथै बाथ र टाउको दुख्ने जस्ता शरीरका विभिन्‍न भाग दुख्ने समस्या हुन्छ *
क्षमा दिनु भनेको के हो? क्षमा दिनु भनेको गल्ती गर्ने व्यक्‍तिलाई माफी दिनु अनि रिस, द्वेष र बदलाको भावना नराख्नु हो। तर यसको मतलब गल्तीहरूमा आँखा चिम्लिनु, गल्तीलाई सानो बनाउनु वा गल्ती नै नभएको जस्तो भान पार्नु त पटक्कै होइन। बरु क्षमा दिनु भनेको राम्ररी सोचविचार गरेर गरिने व्यक्‍तिगत छनौट हो, जुन प्रेममा आधारित हुन्छ। यसले अरूसित शान्तिमय र सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्न मदत गर्छ।
क्षमा दिनुमा अरूको अवस्था राम्ररी बुझ्नु पनि समावेश छ। क्षमाशील व्यक्‍तिले हामी सबै जना बोली र काममा चुक्छौँ भनेर बुझेको हुन्छ। (रोमी ३:२३) यही कुरालाई जोड दिँदै बाइबल भन्छ: “यदि कसैसित केही गुनासो छ भने एक-अर्कालाई सहिरहो अनि खुला मनले क्षमा गरिरहो।”—कलस्सी ३:१३.
यसकारण क्षमा प्रेमको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जुन “पूर्ण एकतामा गाँस्ने बन्धन हो।” (कलस्सी ३:१४) मायो क्लिनिक वेबसाइटका अनुसार क्षमाशील हुँदा यस्ता फाइदाहरू हुन्छन्‌:
अरूसित राम्रो सम्बन्ध गाँस्न मदत पाउँछौँ अनिगल्ती गर्नेप्रति सहानुभूतिशील, विचारशील र दयालु हुन उत्प्रेरित हुन्छौँ
मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ र उच्च नैतिक स्तर कायम राख्न सक्छौँ
चिन्ता-फिक्री, तनाव र दुस्मनी कम हुन्छ
डिप्रेसन हुने जोखिम कम हुन्छ
आफूलाई क्षमा दिने। चिकित्साशास्त्रसित सम्बन्धित एउटा पत्रिकाअनुसार (डिस्‌एबिलिटी एन्ड रिह्‍याबिलिटेसन) आफूलाई क्षमा दिनु फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै “गाह्रो हुन सक्छ” तर मानसिक र शारीरिक “स्वास्थ्यको लागि यसो गर्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ।” आफूलाई क्षमा दिन तपाईँलाई केले मदत गर्न सक्छ?
आफूबाट ज्यादै माग नगर्नुहोस्‌, आफूबाट पनि गल्ती हुन्छ भन्‍ने कुरा व्यावहारिक भई स्विकार्नुहोस्‌।—उपदेशक ७:२०.
गल्तीहरू फेरि नदोहोऱ्‍याउन तीबाट पाठ सिक्नुहोस्‌।
आफूमा भएका कुनै-कुनै खराब व्यक्‍तित्व वा आनीबानी रातारात हटाउन सकिँदैन; त्यसैले धीरजी हुनुहोस्‌।—एफिसी ४:२३, २४.
तपाईँलाई प्रोत्साहन दिने, सकारात्मक, दयालु अनि इमानदार भई तपाईँका कमीकमजोरी देखाइदिने साथीहरूसित सङ्‌गत गर्नुहोस्‌।—हितोपदेश १३:२०.
तपाईँले कसैको चित्त दुखाउनुभयो भने माफी माग्न आफै अघि सर्नुहोस्‌। शान्ति कायम गर्नुभयो भने तपाईँले मनोशान्ति पाउन सक्नुहुनेछ।—मत्ती ५:२३, २४.
बाइबलका सिद्धान्तहरू साँच्चै प्रभावकारी छन्‌!
सुरुमा उल्लेख गरिएकी प्याट्रिसियाले बाइबल अध्ययन गरेपछि क्षमा दिन सिकिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “रिसले मेरो जीवनै खल्लो बनाइदिएको थियो। तर अहिले रिस त्याग्न सकेकीले म आनन्दित छु र मेरो कारण अरूले पनि दुःख भोग्नुपरेको छैन। परमेश्‍वर हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्तम कुरा चाहनुहुन्छ भनेर बाइबलका सिद्धान्तहरूले स्पष्ट पार्छ।”
रोन नाम गरेका एक पुरुष भन्छन्‌: “म अरूको सोचाइ र काम नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ। तर आफ्नो भने नियन्त्रणमा राख्न सक्छु। त्यसैले शान्तिमा रहन मैले आफ्नो मनबाट द्वेष हटाउनै पर्थ्यो। शान्ति र द्वेष भनेको उत्तर र दक्षिण हो भन्‍ने लाग्यो। म एकै पटक दुवै ठाउँमा हुन सक्दिनँ। अहिले आफ्नो अन्तस्करण सफा राख्न सकेको छु।”
^ अनु. 8 स्रोत: मायो क्लिनिक र जन्स हपकिन्स मेडिसिन वेबसाइट र सोसल साइकियाट्री एन्ड साइकियाट्रिक एपिडेमोलोजी पत्रिका।
क्षमाशील हुनुमा यस्ता फाइदाहरू छन्‌:
राम्रो सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ र मनोशान्ति पाइन्छ
चिन्ता-फिक्री, दुस्मनी र तनाव कम हुन्छ
शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सकिन्छ र उच्च नैतिक स्तर कायम राख्न सकिन्छ
जीवनसाथीले चित्त दुखाउने व्यवहार गर्दा क्षमा गर्नु भनेको चित्त दुखाउने कुरालाई हल्कासित लिनु अथवा त्यो कुरा कहिल्यै नभएको जस्तो गर्नु हो?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने क्षमा
खुला मनले क्षमा गर